Kudza Router 3 ongororo: Iyo Wi-Fi 6 router iri smart uye yakashongedzwa - WebSetNet
Iyo inofarirwa, inoshanda router inoita zvakanaka uye inonunura Wi-Fi 6 pane yakachipa. Chii chisingade?
Zvakanakira Wi-Fi 6 pamutengo unoshamisaSekete, dhizaini dhizaini Kumisikidza uye kubataMakoni Kwete nekukurumidza seanokwikwidza mairairaAkaganhurirwa epanyama anobatanidzaBasic, inoshanda ficha yakatarwa
Usapotsa iyi INSANE Kudza Router 3 kupihwa
Iwe unogona kukanda iyo Honor Router 3 yeinongova £ 50 izvozvi kuburikidza neiyo Honor webhusaiti. Iyi yakatemwa-yenguva £ 30 yekuchengetedza inosundira iyo isingadhuri Wi-Fi 6 router munzvimbo dzeasina musoro zvakachipa, saka usarasikirwe.HonorWas £ 80Zvino £ 50Tenga izvozvi
Masaisai ekutanga eWi-Fi 6 ma routers akabuda pakati-2019 asi anga asiri akadhura, kazhinji achidhura kumusoro kweUS $ 200.
Kubva ipapo tanga takamirira kuti mumwe munhu agadzire imwe nzira inokwanisika uye, pakupedzisira, Rukudzo rwapwanya chinodzivisa mutengo ne Honor Router 3. Iyi compact router ingaite senge isingashamise, asi inounza inotevera-chizvarwa Wi-Fi 6 (802.11 ax) networking for chete £ 72.
DAHAI HONOR Router 3 ine Wireless Wi-Fi 6 Plus 3000 Mbps Dual Core 1.2GHz processor MESH Network, WPA3 Security uye Nyore Setup Smart Home Hofisi Internet.
£ 79.00 Tenga izvozvi
Kudza Router 3 ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Iyo Honor Router 3 ndeye yakakosha mbiri-bhendi router isina yemukati modem yayo pachayo. Iko kukanda idiki uye yakapusa, uye kana iwe ukatarisa pasi pepa pepa iwe unowana zvishoma munzira yezvinhu zvinopenya. Usabvisirwe, kunyange zvakadaro: yakagadzirirwa neakanaka-akasarudzwa, anoshanda seti eanogona anozopindura zvese zvinodiwa zve network zvemhuri zhinji.
Inonyanya kunakidza yeavo, hongu, ndeye Wi-Fi 6, iyo inounza kuvandudzwa mukumhanya uye concurrency ichienzaniswa nevakuru mairaira. Kana ichishandiswa nevatengi 802.11ax, iyo Honor Router 3 inotaura pamusoro pekufungidzira kweanosvika 3,000Mbits / sec, inosanganisira 574Mbits / sec pane 2.4GHz bhendi uye 2,402Mbits / sec pamusoro pe5GHz. Semazuva ese, zvishandiso zvekare zve802.11ac zvinogona kubatana, futi, asi havazoone kuita kwepamusoro, nekumhanya kwavo kwepamusoro kunogumira pa866Mbits / sec.
Tenga izvozvi kubva kuna Rukudzo
Honor Router 3 ongororo: Mutengo uye makwikwi
Iyo Router 3 yakachipa kwazvo kupfuura chero yapfuura Wi-Fi 6 router yatakaona. Pa £ 72 inotora pasi yakawanda yeWi-Fi 5 (802.11ac) mairaira. Kana iwe uchida kuenda negrey yekungenisa nzira, unogona kudzikisa mutengo pasi zvakare: izvozvi, AliExpress ichakutengesera iyo Honor Router 3 kune zvisinganzwisisike pasi £ 26.56 (pamwe ne £ 10.99 kutumira), kunyangwe zvingatora nguva kuti usvike, hongu, akajairwa ekutsigira mapako anoshanda.
Zvakanaka kutaura kuti isu hatina kuona chero chinhu chaienzanisike pamutengo uyu. Anokwikwidza wepedyo ndeye D-Batanidza DIR-1960, iyo yakaunganidza ongororo shanu-nyeredzi pa £ 121 uye yaunogona izvozvi tenga kuAmazon kwe £ 105. Inosanganisira yakavakirwa-mumba kuchengetedzeka uye kusangana ne Alexa neGoogle Mubatsiri, chero ipi iyo iyo Honor Router 3 inogona kuzvirumbidza; zvisinei, inovimba neyakare-chikoro 802.11ac Wi-Fi, zvinoreva kuti haigone kuvhura izere nekugona kugona kweiyo nyowani Wi-Fi 6 zvishandiso.
NETGEAR Nighthawk 4-Stream AX4 Wifi 6 Router (RAX40) - AX3000 Wireless Speed ​​(Kusvikira 3 Gbps) | 1,500 sq. Ft. Kuvhara
£ 139.98 Tenga izvozvi
Kana iwe uchishuva kukwira kuenda kune yazvino isina waya standard, inotevera inodhura Wi-Fi 6 router yatakaona ndiyo Netgear Nightawk AX4. Zvekare, izvi zvine zvimwe zvinoratidza iyo Honor Router 3 isipo, kusanganisira USB socket yekubatanidza yekunze chengetedzo kana purinda asi, nepo iyo AX4 inonyatso tsigira 802.11ax, haina kukurumidza seyakanakisa mamodheru ataona uye ichiri zvakapetwa mutengo weRukudzo, kuuya mukati £ 150 paAmazon.
Kudza Router 3 ongororo: Dhizaini
Iyo Router 3 iri, mumaonero edu, chidimbu chinogadzirwa dhizaini. Iyo inonaka inonaka, iine matte chena casing iyo isingatarise kunze kwenzvimbo muApple Chitoro. Izwi rekuti "Rukudzo" rakaburitsirwa pamusoro zvine hungwaru uye, kumashure, ina dzakatenderedzwa nyerere dzinonamira kumusoro, ine logo ye "Wi-Fi 6 Plus" yakadhindwa padenga rerudyi kungo wedzera imwe asymmetry. (Kana iwe uchishamisika, iyo "Uyezve" inoita kunge ingori yekushambadzira fizz, isina kana chirevo chakatsanangurwa.
Iko hakuna kana chinhu munzira yemarambi kana kutonga. Kumberi, iimwe LED inovhenekesa mavara akasiyana siyana kuratidza mamiriro e router, uye pane bhatani reWPS pamusoro kuitira nyore pairing. Kumashure, kwakaparadzaniswa pakati pemaeleri, iwe unowana mana maGigabit Ethernet madoko - unogona kubatanidza modem yako kune chero chimwe cheizvi uye iyo router yakangwara zvakakwana kuti uone zvekuita - uye pini reset reset bhatani.
Kutaura panyama, ndizvo zvega zviripo kune iyo Router 3. Iko hakuna kana bhatani remagetsi, saka kana iwe uchida kudzima chinhu icho uchafanirwa kuburitsa tambo yemagetsi kunze, Raspberry Pi-chimiro. Zvingave zvaifadza kuona chiteshi che USB kana maviri, uye pamwe anopfuura matatu matatu anowanikwa eEthernet macomputer, asi kuchena kwechimiro kune kukwezva kwayo.
Kudza Router 3 ongororo: Zvimiro uye app
Iwe unogona kumisikidza iyo Router 3 uchishandisa chero webhu bhurawuza kana iyo Huawei Ai Hupenyu app (chisingawanzo kubvuma kweRukudzo rwevabereki chiratidzo). Iyo QR kodhi inobatsira yakadhindwa pazasi peiyo router inokutora iwe kuenda yakananga kurodha peji reiyo Android app; iwe unogona zvakare kuiwana paGoogle Play uye muApple App.
Pandakangovhura iyo app, yakabva yaona isina kugadziriswa router uye ndokundikoka kuti ndibatanidze kune yayo Wi-Fi network. Kana iyo router isina kubatana neinternet, iwe ikozvino unozokurudzirwa kuti uvhare mune yako modem kana kumisikidza iyo router mune inodzokorora modhi. Kana iwe ukatora iyo yekupedzisira sarudzo, iyo Router 3 inozoerekana yawana chero iri padyo inoenderana router kubva kuna Honor kana Huawei, uye pachena kuendesa iyo chiratidzo, pasina hunyanzvi hwekugadziriswa hunodiwa. Isu takaona chimiro ichi pane mamwe ma routers zvisati zvaitika, asi ino inogona kunge iri nguva yekutanga iyo hardware kunge yakachipa zvakakwana kuti iite sarudzo inoidza.
Kana iwe ukasarudza pachinzvimbo kushandisa iyo Router 3 se, futi, rauta, ipapo iwe uchaendeswa kune yekumisikidza peji iyo inobvunza kana iwe uchida kusanganisa iyo 2.4GHz uye 5GHz mabhendi pasi peimwe SSID, kana kuapatsanura kuita maviri akasiyana network. Iwe unokurudzirwa zvakare kuti utumidzezve network yako, seta password yeWi-Fi - ese ari maviri WPA2 uye WPA3 anotsigirwa panguva imwe chete - uye gadzira rakasimba rezwi rekutungamira reiyo router pachayo.
Nezve izvi zvaitwa zvakanangana neakakura manejimendi interface; unogona kusarudza kupinda mune izvi otomatiki nguva inotevera paunovhura iyo app, kana kuda password yako nguva dzese. Iyo huru skrini inoratidzira mhenyu bandwidth mita, pamwe chete nemabhatani mahombe ekumisikidza kudzora kwevabereki uye yevaenzi network yeWi-Fi. Iwo maitirwo haanyatso kujeka - anongokutendera iwe kuti ugadzire mitemo inovharira internet kuwana pakati penguva dzakatarwa - asi iwe unogona kusanganisa mitemo kuti ugadzire marongero akaomarara uye chishandiso chimwe nechimwe pane yako network chinogona kuva nezvirongwa zvaro.
Iyo yevaenzi network inogoneka, futi. Semazuva ese, iwe unogona kupa iri zita retsika, uye kana kurisiya risina kuchengetedzwa kana kushandisa rakasarudzika passphrase. Kuwedzeredzwa kwakanaka ndiyo sarudzo yekumisikidza netiweki yevaenzi mushure menguva yakatarwa (kunyangwe zvisingaite sarudzo chete maawa mana, zuva rimwe kana kusatomboita), uye kugona kukwira kwakadzika bandwidth, kuona kuti vashanyi havagone kukanganisa mashandiro e iyo huru network.
Kune avo vanofarira echinyakare browser-yakavakirwa portal iyo Honor Router 3's yakashambidzika uye inoteerera uye inofumura mashoma mashoma epamberi sarudzo asingawanikwe muapp. Izvi zvinosanganisira kumisikidza yako IP uye DHCP marongero (oddly, iyo Router 3 inokanganisa kusvika 192.168.3.x renji), kuchengetera kero kune chaiwo vatengi, kumisikidza chiteshi kufambisa, kudzivirira mamwe MAC kero uye kugonesa kana kuremadza UPnP. Iwe unogona kumisikidza iyo router kutumira rese traffic pamusoro peinobuda L2TP kana PPTP VPN, futi.
Mamwe mashoma maficha asi anozivikanwa nekusavapo kwavo. Iwe hausi kuzowana chero QoS zvinodzora, kana simba DNS kana izwi mubatsiri mubatanidzwa. Sezvo pasina madoko eUSB, unogona kukanganwa nezvekugovana faira kana 4G failover uye zvinosuwisa kuti bhatani reWPS harigone kuremerwa, sezvo ichi chingave gomba rekuchengetedza kana yako router iri munzvimbo inowanikwa nyore nyore. Zvakadaro, vazhinji vashandisi vekumba vanowana iyo Router 3 inoita zvese zvavanoda.
Kudza Router 3 ongororo: Performance
Parizvino zvakanaka asi mumwe mubvunzo unopisa unosara. Inogona here sub- £ 80 router kuendesa izere mashiripiti eWi-Fi 6? Ini handirove nezvegwenzi: mhinduro ndeye inonzwika "kwete chaizvo".
Ndakafunga izvi nekuita yangu yakajairwa bvunzo, kumisikidza router mumba yekutandarira uye kufamba-famba mumba mangu neakakodzera laputopu, mune ino kesi HP Elite Dragonfly, yakashongedzerwa neIntel AX200 2 × 2 160MHz Wi- Fi 6 kadhi. Kubva kunzvimbo ina dzakasiyana, ini ndakabatana neiyo router pane iyo 5GHz bhendi uye kuyera kurodha kumhanya kubva kuchinhu cheNAS chakabatana neiyo router kuburikidza neEthernet.
Iwe unozowana mhedzisiro pazasi; yekufananidza, ini zvakare ndakasanganisira manhamba kubva kune mamwe matatu maWi-Fi 6 ma routers, ayo ari ma150 Netgear Nightawk AX4 zvataurwa pamusoro, iyo TP-Batanidza Archer AX6000, iyo inotengesa yakadzikira £ 258, uye iyo Asus RT-AX88U, iyo ichiri yedu yepedyo yeWi-Fi 6 router asi iri kunyange pricier pa £ 280.
Rukudzo akafamba nemuyedzo iyi pasina hiccup. Kunyangwe muimba yekugezera - uko maWi-Fi anonongedzera dzimwe nguva kunopinda mukati - yakachengetedza avhareji reti yekurodha ye10.2MB / sec (yakaenzana neanosvika makumi masere makumi masere / sec), inomiririra kanopfuura katatu bhanwidth iyo Netflix inokurudzira vhidhiyo ye80K HDR kuyerera.
Kana iwe ukaitika kuve neRukudzo smartphone, iyo inogadzira inozvirumbidza kuti yayo inobata "Dynamic Narrow Bandwidth tekinoroji" - chero zvazvinoreva - inogona otomatiki kusimudzira simba rekutumira kuti ipe yakasimba kwazvo, inokurumidza inogoneka chiratidzo. Kunyangwe zvakadaro, hapana kwekutenderedza kwariri: iyo Router 3 inonyatso kuwira pasi peye 802.11ax mashandiro atakaona kubva kune mamwe upmarket mairaira.
Ini ndakaedzawo kumhanya pamusoro pe802.11ac; mushure mezvose, nepo malaptop achangoburwa uye nhare dzinenge dzese dzinotsigira Wi-Fi 6, izvo zvingangodaro zvisati zvanyura mumba mako. Iko kubhejera kwakanaka kuti, kwegore rinotevera kana maviri, iwe unenge uchivimba kanenge chikamu pane yekare network network.
Pano Rukudzo anoita zvirinani kwazvo. Seizvo zvimiro zviri pazasi zvinoratidza, yakapa chiratidzo chakasimba kunyangwe nzvimbo dziri kure dzeimba, hapana kwainonyudza pazasi peiyo yakasimba 11MB / sec yekukanda chiyero:
Iwe uchacherekedza apa kuti iyo Router 3 inoita kunge inopfuura iyo inodhura kwazvo makwikwi. Iyi haisi yakafanana-ye-fananidzo, zvisinei, sezvo manhamba evamwe ma routers akawanikwa vachishandisa 2017 Surface Laptop yakagadzirirwa Marvell Avastar AC 2 × 2 MIMO kadhi yeWi-Fi. Kwedu kwazvino 802.11ac bvunzo, isu tachinjira ku 2020 Huawei Matebook X Pro, iyo ine nyowani yeIntel AC9560 160MHz adapter, ichiigonesa kuwana yakanyanya kunaka kunze kweiyo Router 3's 160MHz Wi-Fi 5 Hardware.
Izvi zvinoreva kuti handigone kuzivisa pachena kuti Honor Router 3 inokurumidza kupfuura kukwikwidza pamusoro pe802.11ac. Izvo zvakakoshawo kuyeuka kuti ichi chinongova chechipiri-bhendi dhizaini, saka kana iwe uine yakawanda yeWi-Fi 5 vatengi vese vanoda kutumira uye kugamuchira data kamwechete, kumhanya kunogona kukurumidza kutambura. .
Kunyangwe zvakadaro, ndiri kufara kutaura kuti iyo Router 3 inokurumidza zvakakwana kune vese asi mabasa anonyanya kudzvanya, uye inofanirwa kusvika kumagumo eimba yepakati-saizi pasina chero chinodiwa chevadzokorori vechisimba kana anodhura mesh marongero. Ndiwo mhedzisiro yakanaka yeasinga bvumike, inodhura router - uye, chokwadika, kana iwe uchida imwe yekuwedzera renji, zvinokwanisika zvakakwana kutenga chechipiri unit uye kurishandisa se zero-yekugadzirisa extender.
Kudza Router 3 ongororo: Mutongo
Hatifanire kushamisika kuti iyo £ 72 router haigone kuenderana ne Hardware inodhura zvakapetwa kana zvakapetwa. Iyo Wi-Fi 6 logo haisi, pachayo, vimbiso yekuita. Sezvakangoita mumusika weWi-Fi 5, mamwe ma-routers-chizvarwa anotevera anokurumidza kupfuura vamwe.
Asi zvakadaro iyo Router 3 inogona kugara pasi petafura yedu 802.11ax yekuita, haina kumbononoka. Kana mutengi wako achitsigira Wi-Fi 6, iwe ungangoona kumhanya kuri nani kubva kuRouter 3 pane yaunowana kubva kumusoro-kwe-iyo-nhare yeWi-Fi 5 router. Kunyangwe pamusoro pekubatana kwenhaka, zvakaoma kufungidzira mamiriro echokwadi epamba apo iyo Router 3 ichakudzosera kumashure.
Muchidimbu, iyo Honor Router 3 yakafanana, inoshanda router. Haisi yakasarudzika maererano nespeed, kana maficha, asi zvakaoma kwazvo kunyunyuta nezve yakadzikama isina waya kumhanya, kufukidza kufukidza uye zvine mwero kumhanyisa kusimudzira kweiyo nyowani Hardware - uye iri rakanaka bhokisi diki rinovanunura vese kune unenge usingadzoreke mutengo.
Wakagadzirira kusimudzira yako mesh Wi-Fi? Idzi ndedzimwe sarudzo dzakanakisa
Kudza 5C vs Kudza 5X vs Kudza 6A vs Kudza 6X: Ndeipi iri bhajeti rakanakisa Kudza foni izvozvi?
Kudza 9 Vs Kudza 8 Pro Vs Kukudza 8: Ndeupi mutsauko?
Yakanakisa mesh routers yeMacs 2020
Kudza 9N Yekukurumidza Ongororo: Unyanzvi hwounyanzvi muchikamu chebhajeti
Google Nest Mini ongororo: Kugadziridza kwakapfava kweye Google mudiki mutauri akachenjera
Lenovo Yoga S940 maoko-pane ongororo: Iyo iron-grey runako rakagadzirirwa kutendeuka misoro